Alaab -qeybiyeyaasha wiishka oo Dhameystiran - Shiinaha oo Soo -saareyaasha Wiishka Dhammeystiran
Xamuul (kg): 260, 320, 400
Xawaaraha dib loo dhigay (m/s): 0.4, 0.4, 0.4
Cabbirka baabuurka (CW × CD): 1000*800, 1100*900,1200*1000
Dhererka kore (mm): 2200
Baaskiiluhu wuxuu ka kooban yahay waddo jaranjaro ah iyo gacmo -gacmeedyada labada dhinac. Qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah tallaabooyin, silsilado goos goos ah iyo jaranjarooyin, nidaamyada tareenka hagaha, hababka gudbinta ugu weyn (oo ay ku jiraan matoorrada, aaladaha dhimista, bareegyada iyo xiriiriyeyaasha gudbinta dhexe, iwm.), Dunmiiqa wadista, iyo waddooyinka jaranjarada.
Wiishashka xamuulka ee Tianhongyi wuxuu qaataa hogaamiyaha cusub ee microcomputer -ka ee la xakameynayo beddelka nidaamka xakamaynta xawaaraha korantada, laga bilaabo waxqabadka ilaa faahfaahinta, waa sidaha ku habboon gaadiidka tooska ah ee alaabada. Wiishashka xamuulka wuxuu leeyahay afar birood oo hage ah iyo lix tareen oo hage ah.
Qolka mashiinka Tianhongyi wiishka rakaabka ka yar wuxuu qaataa teknolojiyadda is-dhexgalka sare ee isku-dhafan ee nidaamka xakamaynta microcomputer iyo nidaamka inverter, kaas oo si guud u hagaajinaya xawaaraha jawaabta iyo isku halaynta nidaamka.
Wiishashka Tianhongyi wuxuu qaataa mashiinka jajaban ee bilaa magnetka ah ee joogtada ah, nidaamka mashiinka albaabka soo noqnoqoshada soo noqnoqda, tikniyoolajiyadda xakamaynta isku dhafan, nidaamka ilaalinta albaabka daahyada, nalalka baabuurka otomaatiga ah, soo jiidashada xasaasiga ah iyo keydinta tamarta badan;